Firmware ekwentị na ngwaọrụ ndị ọzọ | December 2019
Isi Firmware ekwentị na ngwaọrụ ndị ọzọ
Kedu ka esi gbanye Flash smartphone Fly IQ445 GENIUS
Ọtụtụ ndị nwe ama smartphone Fly IQ445 Gbasara anya ma ọ dịkarịa ala otu ugboro ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala nụ banyere ohere nke iweghachi ngwaọrụ Android os na ngwaọrụ iji weghachite ikike ọrụ ya, gbasawanye ọrụ, mepụta ọganihu ọ bụla na usoro ngwanrọ. Isiokwu a na-enye gị nkọwa nke ngwaọrụ na ụzọ nke na-egbukepụ ihe nlereanya a kapịrị ọnụ nke ndị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ike iji mee ihe, gụnyere ndị na-enweghị uche n'ihe gbasara iji ọrụ ngwaọrụ mkpanaka arụ ọrụ, site n'aka onye ọrụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ nke ngwaọrụ Android maara na nyocha ndị ahụ na ntanetị, ntinye mgbakwunye na mgbatị dị iche iche na-eduga na arụmọrụ ngwaọrụ, nke a ga-edozi naanị site na ịwụnye usoro ahụ dị ọcha, usoro a na-egosikwa nhichacha zuru oke nke ozi niile site na ebe nchekwa.
Firmware na nrụzi nke ASUS RT-N12 VP (B1) rawụta
Onye nbibi ọ bụla na-arụ ọrụ ya n'ihi njikọ nke abụọ nke components: ngwaike na ngwanrọ. Ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume igbochi ndị modulu teknụzụ nke ngwaọrụ maka onye ọrụ ọ bụla, mgbe ahụ, ngwa ngwa ahụ nwere ike ọfụma ọbụna onye nwe router ga-edozi onwe ya.
Họrọ ngwa ngwa MIUI
Ndị na-emepụta smartphones na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ Xiaomi mara taa maka ndị niile Fans nke gam akporo ngwaọrụ. Ọtụtụ ndị maara na njem mmeri nke ịga nke ọma Xiaomi amaliteghị na mmepụta nke ngwaọrụ, kama site na mmepe nke gam akporo-firmware MIUI. Ebe ọ bụ na ọ dị ogologo oge gara aga, ọkpụkpụ ahụ ka dị mkpa n'etiti ndị ọkachamara nke omenala na-eji MIUI dị ka OS na smartphones na mbadamba site na ndị nrụpụta dị iche iche.
Imirikiti Samsung smartphones na-eji ndụ ogologo oge na-arụ ọrụ n'ihi ogo dị elu nke ngwaike ngwaike nke onye na-emepụta ihe. Ọbụna mgbe ọtụtụ afọ nke arụ ọrụ, n'ọtụtụ ọnọdụ, ngwaọrụ ndị ahụ na-anọgide na-arụ ọrụ nke ọma, ụfọdụ n'ime mkpesa sitere na ndị ọrụ nwere ike ime naanị site na ngwanrọ ha.
Na-egbukepụ ma na-eweghachi smartphone HTC Desire 516 Dual Sim
Ọchịchọ HTC Desire 516 Dual Sim bụ smartphone na, dị ka ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ Android, nwere ike ịmepụ n'ọtụtụ ụzọ. Ntinye usoro software bu ihe di nkpa nke na-adighi adighi nma n'etiti ndi nwe ihe nlereanya a. Mmetụta ndị dị otú a na-eme ka o kwe omume "ịmeghachi" ngwaọrụ ahụ n'ụzọ ihe omume nakwa dị ka ihe ịga nke ọma na nke ọma, yana iji weghachite arụmọrụ furu efu n'ihi nkwụsị na njehie.
Firmware maka gam akporo ngwaọrụ dabere na MTK site na SP FlashTool
Igwe ngwongwo MTK dịka ihe ndabere maka ịmepụta smartphones nke oge a, kọmputa na ngwaọrụ ndị ọzọ aghọwo ebe nile. Tinyere ngwaọrụ dịgasị iche iche, ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ site na ọdịiche nke gam akporo os - ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ nchịkwa na omenala dị maka ngwaọrụ MTK nwere ike iru ọtụtụ iri na abụọ!
Smartware smartphone Xiaomi Redmi 3 (PRO)
ASUS ndị smartphones ga-enwe mmasị n'ogo dị elu n'etiti ndị na-azụ ihe ngwaọrụ nke oge a, gụnyere n'ihi ọrụ dị mma nke ọtụtụ ọrụ ha. N'okwu a, na ngwaọrụ ọ bụla, ị nwere ike ịhụ ntụpọ, karịsịa na ngwanrọ ya. Isiokwu a ga-atụle otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu n'etiti ndị smartphones nke ASUS na Taiwanese - nke ZenFone 2 ZE551ML nlereanya.
Nweta ngwa ngwa na ZyXEL Keenetic Lite rawụta
ZyXEL Keenetic routers, gụnyere akwụkwọ Lite, na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ site na ịnweta na interface a na-apụghị ịghọta aghọta, nke na-enye ohere imelite ngwa ngwa n'enweghị nkà pụrụ iche. N'okpuru isiokwu a, anyị ga-akọwa usoro a n'ụzọ zuru ezu n'ụzọ abụọ. Ịwụnye ngwa ngwa na ZyXEL Keenetic Lite Na ụdị ZyXEL Keenetic dị iche iche, interface ahụ dị ka ihe yiri ya, nke mere e ji etinye nwelite ngwa ngwa na ntọala n'ụzọ yiri nke ahụ.
Firmware maka Lenovo IdeaPhone P780
Firmware na Iweghachite maka ASUS RT-N10 Nyocha
Ndị na-emegharị ụzọ na-enye ASUS, bụ ihe ndụ ogologo oge. Ọbụna ụdị omume omume oge ochie, nke a tọhapụrụ karịa afọ ise gara aga, nwere ike ịrụ ọrụ ha nke ọma taa, mana anyị ekwesịghị ichefu nchegharị dị mkpa iji nọgide na-enwe microprogram nke na-achịkwa ọrụ nke ngwaọrụ ahụ.
Igwefoto Firmware Google Nexus 7 3G (2012)
Ụzọ niile nke na-egbukepụ ekwentị Lenovo A536
Ole na ole ndị ọrụ nke Lenovo smartphones maara nke ọma na ha nwere ike iji ngwaọrụ ha gbanwere. Ka anyị kwuo banyere otu n'ime ụdị kachasị - ihe ngwọta ego nke Lenovo A536, ma ọ bụ kama nke ahụ, lee ka ntanye ngwaọrụ. N'agbanyeghi ebumnuche nke eji arụ ọrụ na ebe nchekwa nke ngwaọrụ ahụ, ọ dị mkpa ịghọta ihe ize ndụ nke usoro ahụ, ọ bụ ezie na ịrụ ọrụ na ngwaọrụ a na-atụle bụ ihe dị mfe na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro niile.
Firmware smartphone Meizu M2 Cheta
Otu esi gbaa flash Doogee X5
Doogee bụ otu n'ime ọtụtụ ndị na-emepụta smartphones nke China na-etu ọnụ maka ọkwa nke ụdị mmadụ. Ngwa dị otú ahụ bụ Doogee X5 - ngwa ngwa nke ọma na-arụ ọrụ nke ọma, bụ nke, n'ime igwe eletrik na ọnụ ala dị ala, wetara ihe ngosi na ngwaọrụ karịrị ókèala China.
https://termotools.com ig.termotools.com © Firmware ekwentị na ngwaọrụ ndị ọzọ 2019